Waakan dhambaalkii Tacsida ahaa ee aan ka helay Maxamed Xaaji:
Assalamo Aliakom, Walaal Salaan kadib, Magacaygyu waa Max,ed Xaaji. Waxaan ahay nin reer Qaahira ah. Waxaan ka xumahay in aan akhbaar naxdin leh kuu sido adiga iyo ummada Soomaaliyeed.
Waxaa maanta (April 17, 2013) magaalada Qaahira ku geeriyooday Allaha u Naxariistee Dr. Omar Osman Raabi, oo ah qoraa, macalin iyo barbaariye Soomaaliyeed oo dadyow badan oo Soomaaliyeed uu uga dhignaa Aabahood oo kale. Waxaan la socdaa in aad adiga qof ahaantaada aad qoraaaladiisa iyo dadaaladiisa aad faafin jirtay; sidaa awgeed ayaa kaaga tacsiyeynaayaa geerida Professor-ka.
Dhamaanteenna samir iyo Iimaan allaha inaga wada siiyo.